“Mar walba shaqo’, Jose Mourinho oo Instagram-kiisa soo dhigay sawir fasiraad badan bixinaya! – Gool FM
“Mar walba shaqo’, Jose Mourinho oo Instagram-kiisa soo dhigay sawir fasiraad badan bixinaya!
Kaafi June 16, 2016
(Lisbon) 16 Juunyo 2016. Malaha in badan oo idin ka mida waxa ay u qaadatay in The Special One uu u nasasho tagay Portugal!
Maalmo kahor waxaan soo dhignay Website-keena warbixin sawiro wadata oo ka turjumeysay in tababaraha cusub ee Manchester United uu u dalxiis tagay Portugal isaga oo ay weheliyaan qoyskiisa+Saaxiibka inantiisa Matilde!
Mourinho oo safar dalxiis ku aaday dalkiisa hooyo ee Portugal waxaana la socda qoyskiisa iyo saaxiibka gabadhiisa oo haysta aqoonsiga Jose! [Sawiro]
Yeelkeede isaga ayaa iminka beeniyey in uu nasasho ama raaxo tagay! bal adba….. Waxa uu bartiisa bulshada ee uu sameystay markii loo magacaabay xilka tababare ee Manchester United INSTAGRAM-ka soo dhigay sawir uu taagan yahay buundo bada ku dhex taal waxa uuna ku soo hoos qoray: “MAR WALBA SHAQO”.
A photo posted by Jose Mourinho (@josemourinho) on Jun 16, 2016 at 5:04am PDT
YAA MAANTANA DHIMAN RABA? Xiddiga xulka Wales Aaron Ramsey oo hoos u dhigay wararka inuu shaqsi CAAN ah geeriyoodo markasta uu gool dhaliyo!!
“Inaad Harry Kane u dhiibto qaadista KOORNOOYINKA waa adigoo waydiiyay Lewis Hamilton inuu TAAYARADA ka badelo buubuurkiisa,”. Alan Shearer